University of Illinois at Urbana-Champaign - Education na USA
tọrọ ntọala : 1867
Students (ihe ruru.) : 44000
Echefukwala atụle University of Illinois na Urbana-Champaign
Idebanye aha na University of Illinois na Urbana-Champaign
University of Illinois at Urbana-Champaign bụ a ọha na alụmdi na e hiwere na 1867.
Nkuzi ụgwọ na University of Illinois at Urbana-Champaign na- $31,000 (Aprox.).
The University of Illinois dị na ejima obodo Urbana na Champaign na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke etiti Illinois, naanị awa ole na ole si Chicago, Indianapolis na St. Louis. Na ụlọ akwụkwọ Ịlụso Illini isonye na ihe karịrị 20 NCAA Nkewa m Varsity egwuregwu na bụ akụkụ nke Big Iri Conference. The mahadum obụrede mbụre kasị Greek usoro ke ererimbot, na ọ fọrọ nke nta a nkeji iri na ise nke akwụkwọ ahụ na-agụnye. Ọ bụghị ike ịchọta ihe na-eme na campus na ihe karịrị 1,000 -amụrụ òtù, gụnyere ọrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na philanthropic klọb. All freshmen na-chọrọ ibi na campus.
University of Illinois at Urbana-Champaign comprises 17 n'ụlọ akwụkwọ na kọleji. Ya Graduate School of Library na Information Science, College of Engineering na Department of Psychology bụ n'etiti ndị kasị mma na mba. Ụlọ akwụkwọ si College of Business, College of Education na College of Law na-ukwuu họọrọ. The akwụkwọ na nkewa dị ka a mahadum na dị nnọọ elu nnyocha ọrụ site na Carnegie Foundation maka Ọganihu nke Teaching. The University of Illinois ahụ bụ nke mbụ ụlọ akwụkwọ na-enye nkwarụ ịnweta niile mahadum ọrụ, curricula na ụlọ ọrụ. Ọwọrọiso Alumni agụnye Pulitzer ritere Ihe Nrite film critic Roger Ebert na ngalaba-nchoputa nke YouTube, Steve Chen.
College of Agricultural, Consumer na Environmental Sciences
College of Fine na Applied Arts
gụsịrị akwụkwọ College
School of Labor na Employment Relations
College of emesapụ Arts na Sciences
School of Social Ọrụ
N'etiti ọtụtụ obodo, Urbana a họọrọ na 1867 dị ka saịtị maka ọhụrụ akwụkwọ. Site na mbu, Gregory ọchịchọ guzosie ike alụmdi nnọọ na-emesapụ aka na nkà omenala bụ-emegide ọtụtụ State bi na omeiwu, bụ ndị chọrọ mahadum na-enye ọmụmụ dabeere nanị gburugburu “ulo oru muta”. The University meghere maka klas on March 2, 1868, na abụọ ngalaba òtù na 77 ụmụ akwụkwọ. ” Gregory na-n'ụzọ dị ukwuu-otoro na guzosie ike University dị ka ọ dị taa. Gregory ílì bụ na Urbana campus, n'etiti Altgeld Ụlọ Nzukọ na Henry Administration Building. ya ịkpụ (N'ijije ndị epitaph nke British-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Christopher Wren) -agụ, “Ọ bụrụ na ị na-achọ ya ncheta, anya banyere gị.”
The Library, bụ nke meghekwaara ha na ụlọ akwụkwọ dị na 1868, malitere na 1,039 mpịakọta. ekemende, PresidentEdmund J. James, na a okwu na-Board of Trustees na 1912, chọrọ ike a research n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụ ugbu a otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa ọha agụmakwụkwọ collections. na 1870, na Mumford House E wuru dị ka ihe nlereanya ulo oru ubi n'ihi na ụlọ akwụkwọ ibuo ugbo. The Mumford House na-anọgide ndị kasị ochie Ọdịdị on campus. The mbụ University Ụlọ Nzukọ (1871) e na 4th ụlọ wuru; o we guzo ebe Illini Union guzo taa.
N'oge na-Presidency of Edmund J. James (1904-1920), James na-otoro maka iwuli ntọ-ala nke nnukwu Chinese mba na-amụrụ bi na kampos. James guzosie ike agbatị na China site na Chinese Minister na United States Wu Ting-eze nko Ke adianade, n'oge James si onyeisi oche, klas rivalries na Bob Zuppke na-emeri football ìgwè so kpata campus morale.
on June 11, 1929, na Alma Mater oyiyi e kpughere. The Alma Mater guzobere onyinye site Alumni Fund na klas nke 1923-1929. The oyiyi mbụ guzo n'azu n'ụlọ mgbakọ ruo mgbe ọ kpaliri ya ugbu a ebe on August 22, 1962 Dị ka ọtụtụ Universities, akụ na ụba ịda mbà n'obi slowed ewu na mgbasa na campus ma n'oge a ochie University Ụlọ Nzukọ malitere daa na 1938. The University dochie mbụ mahadum ulo na Gregory Ụlọ Nzukọ na ndị Illini Union. Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ, mahadum ahụmahụ eto ngwa ngwa. The aha okpukpu abụọ na agụmakwụkwọ eguzo mma. Oge a na-eji mata nnukwu ibu na Graduate College na ụba gọọmenti etiti support na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ research.During 1950s na '60s mahadum nwere ọgba aghara nkịtị on ọtụtụ American campuses. Ụfọdụ n'ime ihe ndị miri-akpata ịlụ ọgụ nke fifties na sixties.
na 1998, ụlọ Gateway Plaza e raara. The Plaza atụmatụ mbụ sandstone portal nke New Main University Ụlọ Nzukọ. Na steeti Illinois ọnọ Olee ihe enyemaka abụọ ụzọ n'ụzọ atọ nke mahadum mmefu ego mgbe gọọmenti etiti ọchịchị kwụrụ ụgwọ 90% nke nnyocha. N'afọ adịbeghị anya, ala support jụrụ 4.5% nke obodo si tax pụrụ iche na 1980 ka 2.28% na 2011, a fọrọ nke nta ka 50% Ọdịda. N'ihi ya, mahadum mmefu ego ka ike gbanwere n'ebe ịdabere na ala support na fọrọ nke nta 84% nke ego ugbu a na-abịa site na isi mmalite ndị ọzọ. on March 12, 2015 ndị Board of Trustees mma e kere eke nke a akwụkwọ ahụ, a na-akpa na mahadum kere na Urbana-Champaign ke n'elu 60 afọ.
The mbụ aha ke 1867 bụ “Illinois Industrial University.” na 1885, na Illinois Industrial University eze gbanwere aha ndị University of Illinois, -atụgharị uche ya ugbo, n'ibu, na-emesapụ aka nkà usoro ọmụmụ. Nke a nọgidere na ukara aha nke fọrọ nke nta 100 afọ, ruo mgbe e gbanwere ka University of Illinois at Urbana-Champaign ke 1982 (eji agbara nke ejikarị designation maka mpaghara ebe, “Champaign-Urbana”), ostensibly ka a iche iche njirimara maka campus n'ime University of Illinois usoro. Otú ọ dị, alụmdi na-mara dị ka “na University of Illinois”, ma ọ bụ nanị “Illinois” ma media na on ọtụtụ n'ime UIUC si ibe weebụ. malite na 2008, mahadum malitere rebranding onwe ya dị ka “Illinois” kama UIUC, agbanwe agbanwe na website na adreesị email site uiuc.edu ka Illinois.edu.
Ị chọrọ atụle University of Illinois na Urbana-Champaign ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Illinois na Urbana-Champaign na Map
photos: University of Illinois at Urbana-Champaign ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Illinois na Urbana-Champaign.
University of North Carolina na banye n'Ụlọ Ekpere Hill banye n'Ụlọ Ekpere Hill